ब्लग लेखन लेखक बन्न चाहनेलाई प्रविधिले दिएको उत्कृष्ट कोशेली हो-सिपी अर्याल - MeroReport
ब्लग लेखन लेखक बन्न चाहनेलाई प्रविधिले दिएको उत्कृष्ट कोशेली हो-सिपी अर्याल
नेपाल-भारत सम्बन्ध र बिपी कोइरालाको सवालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अँग्रेजी अध्ययनमा एमफिल थेसिस गर्दै गरेका सिपी अर्याल पेशाले अध्यापक हुन् । लेखाइमा विशेष रुचि राख्ने सिपीलाई अध्ययनमा पनि उत्तिकै चाख छ । यस बाहेक उनी अनुवाद र सम्पादनका कामहरूमा पनि सक्रिय छन् । पत्रपत्रिकाहरूमा नियमित रुपमा कथा, संस्मरण, पुस्तक समीक्षा र फिचरहरू लेखिरहने सिपी कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवाको सागरटोलका स्थायी बासिन्दा हुन् । सामाजिक संजालहरु फेसबुक, ट्विटरमा समेत सक्रिय उनी cparyal.blogspot.com बाट नियमित ब्लगिङ समेत गरिरहन्छन् । यो साता उनै सिपी मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा झुल्किएका छन् । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानी :
म सोसियल मिडियामा आफूलाई एउटा स्वतन्त्र लेखकको रूपमा चिनाउन प्रयासरत छु । ब्लगलाई म सफा सेतो कागज ठान्छु जहाँ म कलमको सहायताले निष्फिक्रि कुद्नसक्छु, रमाउन सक्छु, रुनसक्छु र हाँस्नसक्छु र गतिला केही पदचापहरू छोड्नसक्छु ।
तपाँइको ब्लग cparyal.blogspot.com मात्रै कि अरु पनि छन?
यसबाट मात्र ब्लगिङ गर्छु ।
तपाँइको ब्लगको नाम Expressing Myself किन?
मलाई मेरो ब्लगको सबैभन्दा मन परेके कुरा यसको टाइटल हो । साथीहरूलाई पनि यो टाइटल खुब मन परेको बताउँछन् । ब्लग बनाउँदै थिएँ, टाइटल राख्ने सेक्सन आएपछि अचानक दिमागमा फुर्‍यो Expressing Myself । अनि यही राखेँ । आफ्नै भावना र रुचिका कुरा ब्लगमा पोख्छु त्यसकारण यसको टाइटल यो भन्दा अरू उत्कृष्ट लागेनन्।
यहाँको ब्लगमा साहित्यिक रचनाहरु खासगरी कथाहरु धेरै रहेछन् । खासमा यहाँको ब्लगिङको रुची के हो? भाषा तथा लेख्ने बिषयबस्तु दुबैका बारेमा भन्नुपर्दा ।
मेरो मनपर्ने मध्येको एउटा विधा कथा हो । त्यसबाहेक म पुस्तक समीक्षाहरू पनि पोष्ट गर्छु । अंग्रेजी र नेपाली दुवैमा उत्तिकै लेख्नसक्छु । तरपनि नेपाली भाषा मै आफूलाई अँझ सजिलो लाग्छ । कतिपय भावहरू अंग्रेजीमा भन्दा नेपालीमै सपाट व्याख्या, विश्लेषण र प्रस्तुति दिन मजा लाग्छ । आखिर आफ्नो भनेको आफ्नै हो नि !
तपाँइलाई हामीले अखबारहरुमा पनि निकै पढ्न पाईरहेका हुन्छौँ । आफ्नो ब्लगमा अखबारमा छापिएका कुराहरु मात्रै राख्नुहुन्छ कि कैलेकाँही ब्लगबाटै मिचोचित गराउनुहुन्छ लेखहरुलाई?
अखबारमा छापिएकालाई पोष्ट गर्ने पनि गर्छु र नयाँ लेखहरू ब्लगमै पहिलोपटक पोष्ट गरेर साथीहरूमाझ सेयर पनि गर्छु ।
म प्राय: पत्रपत्रिकामा छापिएका मेरा रचनाहरू ब्लगमा पोष्ट गर्छु । पत्रिकाको पहुँचमा नभएका तर इन्टरनेटको पहुँचमा भएका पाठकहरूको लागि यो निकै मद्दतकारी हुन्छ । त्यसबाहेक केही कथा, फिचर लेखहरू र पुस्तक समीक्षा पनि कहिलेकाहिँ ब्लगबाटै पहिलोपटक पाठकसमक्ष पुर्‍याउँछु । यसबाहेक घतलाग्दा फोटोहरू पनि राख्ने योजना छ । तर समय दिन सकिरहेको छैन ।
सन् २०१० को मध्यवर्षतिरबाट सुरु गरेको ।
मेरा लेखाइहरूलाई स्थायी घरमा राख्न ।
मलाई सबैभन्दा मन पर्ने भनेको फिचर लेखहरू हुन् । यसबाहेक मैले पुस्तकहरू धेरै पढ्ने भएकोले पनि पढिसकेपछि त्यसबारे साथीहरूलाई सुनाउन (यो किताब पढ, त्यो नपढ्दा फरक पर्दैन भन्न) मन लाग्छ । अनि समीक्षा लेख्छु । म कथा पनि लेख्छु । उपन्यास लेख्दै छु । उपन्यासका रमाइला टुक्राहरू पनि सेयर गर्छु कहिलेकाहिँ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न मन नलागेका कथाहरू पनि ब्लगमा राख्छु ।
ब्लग लेख्न थालिसकेपछि आफ्नो ह्रदयमा आफैलाई हेर्नुजत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा पाठकहरूको भावना पनि चियाउन सक्नु हो । यो संसार यति सुन्दर देखिएको धेरै आँखाहरू भएर हो । प्रत्येक आँखाले भोग्ने यथार्थ फरक फरक छन् । कोही पाठकका ब्लगमा लेखिएका लेख आत्मरति/बकम्फुसे गफ बन्छ भने कसैका लाग त्यो निकै चाखलाग्दो लेख बन्नसक्छ ।
साहित्यबाहेक रुचिको विषय भनेको मेरा अनुसन्धानात्मक लेखहरू लेख्ने हुन् । लेखेको पनि छु । तर त्यस्ता लेखहरू चोरी हुने डर लाग्छ । त्यसकारण रुचि भएपनि ब्लगमा ती लेख पोष्ट गर्न सकेको छैन ।
म सानो हुँदा विद्यालयमा हुने साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिन हौसिन्थेँ । तर लेख्न चाहिँ आउँदैनथ्यो । बुवाले संस्कृत शब्द धेरै प्रयोग गरी कविता लेख्नुहुन्थ्यो, छन्दमा । सुरुसुरुमा बुवाले लेखिदिने मैले भाग लिएर वाचन गर्ने गर्थेँ । सधैँजसो फस्ट वा सेकेन्ड वा अन्य केही न केही पुरस्कार पाइरहन्थेँ । सरहरूले थाहा पाउनुहुन्थ्यो त्यो मेरा सिर्जना थिएनन् भनेर, तर केही भन्नुहुन्नथ्यो । सायद मलाई हौस्याउने उहाँहरूको त्यो तरिका थियो । पछि ठूला कक्षामा गएपछि बुवाले लेखिदिएका लेखहरू प्रतियोगितामा लैजान लाज लाग्न थाल्यो । अनि म आफैँ लेख्न थालेँ । यसरी चोरबाटोबाट छिरेपनि पछि म राम्रै बाटो हिँड्न थालेँ । अचेलका मेरा लेख देखेर बुवा छक्क पर्नुहुन्छ, उतिबेला बुवाले लेखिदिएका कविता पढ्दा म छक्क पर्थेँ ।
मैले सिक्दैँ गएँ-सिर्जनात्मक लेख लेख्न मानिसहरूको हिँडाइ, लवाइ, खुवाइ, बोलाइलाई अति सूक्ष्म ढङ्गले मनन गर्न सक्नुपर्छ । सिर्जनात्मक लेख भनेर हामी कथा उपन्यास कविता लेख्छौँ जसको स्रोत हामी वरिपरिकै घटनाहरू हुन् । र, सिर्जनशिल लेखाइ दुई तरिकाबाट हासिल गर्न सकिन्छ : एक, जन्मजात रूपमा (जसलाई हामी Genius भन्छौँ), र दुई, पढ्ने, लेख्ने कडा मिहिनेत गरेर ।
मैले पढेको थिएँ कतै, "१०० वटा पुस्तक पढ अनि बल्ल एक वाक्य लेख।" यो भनाइले मलाई लेख्न बस्नुअगाडि निकै घच्घच्याइरहन्छ । कसैलाई लेखक बन्नु छ, सिर्जनशिल लेखनमा माथि पुग्नु छ भने तीनओटा उपाय छन्: एक पढ्ने, दुई, पढ्ने र तीन, पढ्ने । नपढ्दाको घाटा के हो भने साहित्यमा कस्ता लेखनी आइरहेका छन् पाठकले के रुचाउँछन्, नयाँ प्रयोग कस्ता भइरहेका छन् त्यो थाहा हुन्न । अझ तपाईँले रोजेका विषय अरूले लेखिसकेका छन् कि छैनन् त्यो पनि थाहा हुन्छ । दि रिपिटिसन अफ सेम वर्क इन दि सेम लाइन ह्याज नो मिनिङ एट अल भन्ने चर्चित भनाइ त हामीलाई थाहा छँदैछ ।
ब्लग लेखन लेखक बन्न चाहनेलाई प्रविधिले दिएको उत्कृष्ट कोशेली हो । नेपाली ब्लगरहरूले यसको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् । मूलधारका पत्रपत्रिकामा ठाउँ नपाउनेहरूलाई त यो नागमणी नै भएको छ ।
म प्राय: प्रदीप बस्याल, सफल घिमिरे, ऋचा भट्टराई, जोतारे धाइबा, माइसंसार, दीपक अधिकारी, दिनेश वाग्ले, श्वेता बानियाँ, ब्रबिमकुमार, जनकराज भट्ट र युस्याफ्टको ब्लगघरमा धाइरहन्छु ।
मलाई खासगरी कथाहरू मन पर्छन्, फिचर लेखहरू पनि मन पर्छन् । साथै मैले जोतारे धाइबाले ब्लगमा लेखेका कविता पनि निकै रुचाउँछु ।
आचारसंहिताका अन्य गोलमटोल कुरा भन्दा एउटाले मिहिनेत गरेर लेखेको लेख चोरी हुने क्रम रोक्न सके गजब हुन्थ्यो ।
मेरो सबभन्दा चित्तदुखाइ अरूको रचना आफ्नै झैँ गरेर निर्वाध चोरेर सारिएका ब्लगहरूबारे हो । त्यो अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ। साथै कतिपयले हिज्जे साह्रै बिगारेर, पढ्नै नसकिने गरी लेखेका हुन्छन्। त्यस्ता ब्लग निगरानी गर्नेबारे केही सोँच्नुपर्छ। यो हिज्जेको कुरा गर्दा ट्विटर र फेसबुकमा मानिसहरूले नेपाली कुरा रोमन भाषामा नलेखे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । जान्नेले पनि त्यसो गरिरहेका छन् । त्यसले हाम्रो नेपाली भाषामा धमिरा हुल्ने काम गर्छ ।
सम्झनामा साइकल भन्ने मेरो संस्मरण पहिलोपट मैले आफ्नो ब्लगमा पोष्ट गरेको थिएँ । केही दिनमा त्यो संस्मरण सेतोपाटीमा आयो । त्यसको ब्यापक प्रसार भएको छ । खुब खुसी भएँ ।
तपाइ सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु: ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो ?
ब्लग आत्मप्रस्तुतीको बिशाल समुद्र हो । ट्विटर छोटोमीठो भावमा अनुभव आदानप्रदान गर्न मिल्ने पोखरी । र फेसबुक चाहिँ...... फेसबुकबारे थाहा नभाका को होलान् र हँ !
सामाजिक हितमा लेखिने निकै थोरै ब्लगहरू छन् । वा भएर पनि तिनीहरूको प्रसार नभएको हो कि?
मेरो सबैभन्दा धेरै रुचाइएको ब्लग :
सम्झनामा साइकल, हजुरआमासँग फोन संवाद, कथा (नारायण वाग्लेको पल्पसा क्याफेको अन्त्यलाई भिन्दै ढंगमा लेखेको), हरिबंश आचार्यबारे प्रोफाइल (नागरिकमा छापिएको), र हराएका मानवशास्त्री प्रा. डोरबहादुर विष्टबारे बिजय पौडेलसँग लेखेको संयुक्त लेख (नागरिकमा छापिएको), यी लेखहरू धेरै साथीहरूले रुचाउनु भयो ।
इमान्दार भएर ब्लगिङ गर्दा पनि गुमाउने कुरा हुन्छन् र ?
ब्लगिङलाई म पत्रकारीताको किल्लामा मात्र बाँध्न चाहन्न। स्वतन्त्र लेखन र पत्रकारीताबीच भिन्नता छ। यद्यपि, ब्लग लेखन अन्त कहिँ कतैबाट प्रेसित नभएका नागरिकका खबरभावहरू अटाउने हुलाक चाहिँ हो ।
मेरो रिपोर्टले गरिरहेको यो प्रयासलाई म प्रशंसा गर्छु । यस ब्लगमा देखिने समाचार लगायतका सामग्रीहरू बिलकुल युवा रुचिका भए गजब हुन्थ्यो ।
Comment by sabita Acharya on September 20, 2013 at 4:21pm
Comment by Brabim Kumar on September 18, 2013 at 11:42pm
Badhai chha sathi !